Sunday December 03, 2017 - 09:49:14 in Wararka by Super Admin
Ugu yaraan saddex askari oo ka tirsan ciidamada military-ga Kenya ayaa dhintay, tiro kalena waa ay dhaawacmeen ka dib markii gaari ay la socdeen uu ku qalibmay wadada isku xirta magaalooyinka Wajeer iyo Mandheera ee gobolka waqooyi-bari Kenya.
Shilkan ayaa ka dhacay deegaan lagu magacaabo Ceel-Waaq-Kotulo oo u dhow Mandhera sida ay sheegeen saraakiil u hadashay ciidamada Kenya, waxayna sheegeen in gaariga uu ku socdaalayey wadada weyn ee isku xirta Mandheera iyo Wajeer.
Gudoomiye ku xigeen koonfurta Mandheera Daniel Bundotich ayaa warbaahinta u sheegay in meydadka askarta ku dhimatay shilka iyo kuwa ku dhaawacmay loo qaaday magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya.
Afhayeenka ciidamada military-ga Kenya Colonel David Obonyo ayaa isna xaqiijiyey dhacdadan, wuxuuna tilmaamay in ugu yaraan todobo askari oo kale ay ku dhaawacmeen shilka.
Wuxuu tilmaamay in dhaawacyada la dhigay isbitaal gaar ah oo ku yaalla magaalada Nairobi, halkaas oo gurmad caafimaad loogu sameynayo.
Wararka qaar ayaa tilmaamaya in shilka uu yimid ka dib markii ciidamada uu la kacay qarax aad u xoogan oo miinooyinka dhulka lagu aaso ah ka dibna uu rogmaday gaariga.
Afhayeenka ciidamada ayaa beeniyey wararkaas, wuxuuna sheegay in aanu waxba ka jirin wararka sheegaya in gaariga lala eegtay qarax, ka dibna uu sidaas ku qalibmay.
"Wuxuu ahaa shil caadi ah, ma ahayn weerar argigixiso” ayuu yiri.
Waxaa gobolkan dhowrkii bilood ee ugu dambeeyey ka dhacayey silsilado weeraro ah oo ay geysanayaan Mujaahidiinta Al-Shabaab kuwaas oo xukuumada Kenya ku qasbay in ay gaadiidka caamka ah ka mamnuucaan wadooyinka waaweyn ee gobolka.
Al Shabaab Oo Sheegtay in 2 Askari AMISOM ah Ku Dishay Qarax Ka Dhacay Degmada Huriwaa Ee Magaalada Muqdisho.
Askari katirsan Ciidamada AMISOM Oo Muqdisho Lagu Dilay.
Ciidamo Katirsan Maamulka Puntland Oo Lagu Qarxiyay Duleedka Magaalada Boosaaso.